Ngwa maka Senegal Youth Consortium Hackathon na-emechi n’oge adịghị anya
Home Ndị agha
in Ndị agha
Mpempe ndị ntorobịa nke Senegal Youth Consortium bidoro bụ nyiwe dijitalụ nke na-achọ ịhazi ozi, ngwaọrụ, nkuzi, nkuzi, ohere na ọtụtụ ihe dị iche iche iji wusie ike na ike ụmụ amaala na-esonye nke ndị na-eto eto, mee ka ọnụ ọgụgụ ndị na-eto eto nwee ọrụ na ịzụlite. ikike ịzụ ahịa na ala ịta ahịhịa.
Bụrụ akụkụ nke Senegal Youth Consortium Hackathon nke JokkoLabs Senegal kwadoro ma mepụta usoro ihe eji eme ihe nke na-enye ndị na-eto eto ọzụzụ ọzụzụ, ọrụ na azụmaahịa.
Site na ntinye aka na ntinye aka, Senegal Youth Consortium na-ahazi Hackathon ebumnuche ya bụ ime ka nkọwapụta ahụ sie ike ma chịkọta mkpa na atụmanya nke ndị ọrụ iji zụlite otu ụlọ ahịa maka ndị ntorobịa.
Dejupụta nke a ọmụma itinye maka oge a na-eme ememme 2 na Eprel 23 site na 9:30 nke ụtụtụ ruo 12 elekere na Eprel 24 site na 10 ruo 12:30 elekere
Ebumnuche JokkoLabs sitere n'ọchịchọ ịlụ ọgụ na-enweghị oke na ịchọta ihe ga-eme n'ọdịnihu site na iji ohere nke teknụzụ ozi na mkpokọta ihe ọmụma na-eweta.
JokkoLabs bụ ebumnuche mba ụwa, nke na-abụghị nke na-ebido na Dakar, Senegal. Ọ bụ "tankị nnwere onwe" nke nwere ebumnuche iji chọpụta ma kwado echiche ọhụrụ sitere n'aka ndị ọchụnta ego nke akụ na ụba dijitalụ, ụlọ ọrụ ọdịnala na mgbasa ozi iji mee ka asọmpi nke mba dị iche iche na ọganihu maka mmadụ niile.
Dabere na Dakar, Senegal, JokkoLabs Senegal mepere emepe na 10/10/10 oghere ọrụ mbụ na Africa.
Ugbu a, ọtụtụ hubs gburugburu 7 mba gụnyere France (Nanterre): Sénégal (Dakar, Ziguinchor), Mali (Bamako), Burkina Faso (Ouagadougou), Côte d'Ivoire (2 hubs à Abidjan - Angrè & Vallon, and soon a Fablab in Bingerville / CME na Korhogo), Cameroun (Douala), Gambie (Banjul) na nnọchite 2: na Marocco (Casablanca na Congo (Pointe noire).
Elegharala isiokwu dị mkpa anya n’izu. Idenye aha na techbuild.africa kwa izu nrit maka mmelite.
Ndị mmekọ GoDo Hub Jacaranda Hub ga-ebido Mosi-Oa-Tunya Project, na-ekwupụta Mentors
Mee ngwangwa 2030 Mmemme ga-emepe maka mmalite mmalite nke Sudan